I-Gemic laboratory. Amatshe ayigugu emvelo ngochwepheshe bama-gemologists
UMBONISO WAMAGEMES & UKUHWEBA
Umbukiso waphakade wezinhlobonhlobo zamatshe ayigugu ezingaphezu kwama-250 ezivela eCambodia nasemhlabeni jikelele.
Isikhungo se-gemological esizimele futhi esizimele, esihlinzeka ngezinsizakalo zokuhlola ezomhlaba nezocwaningo.
ISINGENISO KWI-GEM & GEMOLOGY
UKUKHONJWA KWE-GEM - NGOKUVUMELANAYO NOKWELASHWA - UKUTHENGISWA KANYE NOKUHLELWA
Gemstone Museum & Ukuhweba
Thenga amatshe ayigugu esitolo sethu
Isikhungo se-gemological esizimele futhi esizimele, esihlinzeka ngokuhlolwa kwe-gemological, izinsizakalo zocwaningo nezitifiketi zegugu.
ICambodia ingumthombo wakho ngamasafire, amarubhi, ama-zircon nangamatshe amaningi. Sihlela ukuvakasha kusuka ezinsukwini ezi-2 kuye kwezingu-10 kubandakanya ukuhamba, indawo yokuhlala, ukuvakashela izimayini kanye nabagundi begugu.
Sithinte kohambo oluhambisanayo
Introduction to Gem & Gemology
Isingeniso samatshe ayigugu amakhulu atholakala emakethe. Lesi sifundo sokuqala, sokuthuthuka noma sezinga lesazi sigcizelela izici ezibalulekile zalawa magugu.
Ungawabona kanjani amatshe ayigugu emvelo, izinto zokwenziwa, ukwelashwa? Ungalinganisa kanjani ikhwalithi namanani entengo? Uzothola izimpendulo zayo yonke imibuzo yakho phakathi nalesi sigaba.
NEW : Ngenxa yesidingo esikhulu sabafundi bethu abangakwazi ukuhamba phakathi nobhadane, manje sekuyenzeka bafunde ku-inthanethi.
Umnyuziyamu wamatshe ayigugu
I-quartz yase Strawberry
Izindaba zethu zakamuva, izindatshana ezimayelana nezwe eliyigugu.Uhambo lwethu nemicimbi.
I-emerald enkulu kunazo zonke emhlabeni yi-Inkalamu, i-Lion Emerald kodwa i-Bahia Emerald [...]
IHope Diamond iyi-45.52 carat diamond eluhlaza okwesibhakabhaka. Idayimane eliluhlaza okwesibhakabhaka elikhulu kunawo wonke ake athola [...]
Ngibonga uNkk Angelina Jolie
Ngibonga uNkk Angelina Jolie ngalokhu kuvakasha okungalindelekile esitolo sethu namuhla. Ngiyabonga [...]
Uhambo lwaseMogok, eMyanmar
Uhambo lwaseMogok eMyanmar - Ihhotela laseMogok - UMogok Burma ruby ​​uhambo lwaseMogok, eMyanmar Ngemuva [...]
Ukuqeqeshwa kokuthengisa ubucwebe eSabara Angkor Resort naseSpain
Ukuqeqeshwa kokuthengisa ubucwebe eSabara Angkor Resort & Spa UNks Iet uqeqesha abemukeli kanye [...]
Ukuxoxisana ne-TV kazwelonke ye-vietnamese
Ukuxoxisana noLuc Yen ngabuzwa imibuzo namuhla eLuc Yen, yiNational Vietnamese [...]
Ingxoxo ye-TV ye-French
Ukuxoxwa yi-French TV Ngaxoxwa ngesiteshi se-M6 French TV "ENQUETE EXCLUSIVE", mayelana [...]
Ukulethwa kwezinsuku ezi-3 emhlabeni jikelele
Ukuthunyelwa kweFedex Express kuvamise ukuthatha izinsuku ezi-3 kuye kwezi-4 ukulethwa. Ukulandelela ku-inthanethi zonke izinyathelo zendlela. Isiginesha iyadingeka lapho silethwa.
amatshe ayigugu ama-4
Ruby pair 2.75 ct $138.00
Inkanyezi ruby ​​3.02 ct $60.00
Inkanyezi ruby ​​6.00 ct $120.00
Inkanyezi ruby ​​3.97 ct $79.00
I-sapphire ebomvu 2.11 ct $633.00
I-sapphire ebomvu 2.52 ct $3,950.00
Isafire yenkanyezi emnyama 1.10 ct $25.00
Isafire yenkanyezi emnyama 2.23 ct $51.00
I-Emerald 0.90 ct $180.00
I-Emerald 0.39 ct $78.00
I-Emerald 0.45 ct $90.00
I-Emerald 0.20 ct $40.00
14K I-Rose Gold Gold Ring $470.00
Idayimane 0.18 ct $117.00
14K I-Rose Gold Gold Ring $530.00
Idayimane 0.15 ct $98.00
… Imininingwane engiyifundile izoba usizo kakhulu esikhathini esizayo futhi ngibheke phambili ekuthatheni elinye ikilasi eMelika ukuze lifunde kabanzi. Uma ngabe uhlela ukuthenga ubucwebe noma yikuphi, kufanele uthathe leli klasi!
blondearch / February 2020
… Ubucwebe buhle impela futhi abasebenzi babenobungane futhi beqeqeshiwe. Ngishiye isitolo ngendandatho enhle ye-onyx ezohlala ingikhumbuza isikhathi sami esichithwe eCambodia :). Ukube benginesikhathi esithe xaxa lapha bengizothanda ukuzama indawo yokusebenzela ukuze ngenze indandatho!
I-Emz / November 2019
… Kuwufanele impela ukuvakashela i-Gemological Institute, futhi bonke abasebenzi banobungcweti, banomusa, banesineke futhi bakuchazela ngegugu ngalinye olithandayo. Ngokuqinisekile ngizobuyela e-Siem Reap ngiyothenga itshe eliyigugu lapha ekuvakasheni kwami ​​okulandelayo. 5 izinkanyezi!
… Ubucwebe buyabiza futhi buhle futhi sijabule kakhulu ngokuthengiwe kwethu. Kukonke okuhlangenwe nakho okuhle engikuncoma kakhulu… besijabule kakhulu ngekhwalithi yezinsizakalo, engaqinisekisiwe ngaso sonke isikhathi kwa-Siem Reap.
ULaurence B / July 2019
… Ikhwalithi nokucaciswa kwamatshe ahlukene esingawathola esitolo. Ekugcineni sathola umgexo omuhle wamatshe wetopazi omhlophe, isipho esifanele engisebenza naye! Ngiyabonga Gemological Institute!
Sayline / Kwangathi 2019
… Ngithole ukuvakashelwa okuthakazelisa kakhulu futhi ngifunde okuningi ngezinhlobonhlobo zamatshe ayigugu.
Bengingazi ngamatshe namagugu ahlukile eCambodia. Izinto ezinhle ongazenza ngaphandle kwethempeli.
UBenji C / Kwangathi 2019
… Sinqume ukubuyela kuye sathenga itshe. Kufanele ngithi iDayini empeleni iGem esitolo. Ngaphandle kwakhe, singahle singafuni nokuthola lutho kuleso sitolo. Isiphetho, lesi sitolo sinokwethenjelwa futhi isitolo saso esihle kunazo zonke engingasithola e-Siem Reap.
UJan Tara / August 2019
… Wayebuya ngokushesha i-imeyili yami futhi sanquma ukuklama nentengo. Iringi ifike masishane futhi ngamangala ngendlela eyenziwe ngayo futhi enhle ngayo. Ngingayincoma ngokuphelele le nsizakalo futhi ngizophinde ngiyenze futhi.
Amaholide23 / August 2019
… Qiniseka ukuthi uvakashela le ndawo uma ufuna amagugu asemthethweni. Yisona kuphela isitolo esiqinisekisiwe e-Siem Reap. Abasebenzi bahlala kahle futhi bazophendula yonke imibuzo yakho.
I-Oly1610 / August 2019